C/laahi Sheekh “Waxba kama jiraan wararka sheegaya in madaxweyne Shariif Xasan uu tanaasulay..” (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/laahi Sheekh “Waxba kama jiraan wararka sheegaya in madaxweyne Shariif Xasan uu tanaasulay..” (DHAGEYSO)
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa si kulul u beeniyay inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Afhayeenka madaxtooyadda maamulka Koonfur Galbeed ahna wasiirka ganacsiga maamulkaas C/laahi Sheekh Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay been abuur tahay wararka la faafiyay ee ku saabsanaa inuu Shariif Xasan ka tanaasulay doorashada xilka madaxtinimada Soomaaliya.
“Waxba kama jiraan wararka sheegaya in madaxweyne Shariif Xasan uu tanaasulay, wuxuu madaxweynaha ka mid yahay musharixiinta ku tartameeysa xilka madaxtinimada Soomaaliya, shaqsi ahaan aniga waxba igama galin waxa dowladda Itoobiya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen, balse waxaa xog-ogaal u ahay inuusan jirin wax tanaasul ah uu sameeyay” Sidaasi waxaa yiri Afhayeenka madaxtooyadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C/laahi Sheekh Xasan.
Dhinaca kale, warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heshay ayaa sheegaya in dowladaha Imaaraadka iyo Itoobiya ay Shariif Xasan ku cadaadiyeen inuu ka tanaasulo musharaxnimadiisa madaxweyne islamarkaana uu taageero musharax ay wataan labadaasi dowladood.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo dhawaan socdaal ku tagay magaalada Addis Ababa, waxaa laga dalbaday inuu ka tanaasulo ololahiisa xilka madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkaan.
Si kastaba, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sh Aadan ayaa la aamisan yahay inuu saameyn xoogan ku leeyahay xubnaha cusub ee baarlamaanka la doortay, isagoona taageero badan ka haysta beelaha Digil iyo Mirifle oo laga yaabo inay codkooda gebi ahaan isaga ugu shubaan.